WordPress: Tutorials, plugins, madingindira uye kuvandudza - Ikkaro
kudzidziswa >> Webmaster >> WordPress
Tutorials paWordPress muchiSpanish. Zvese zvaunoda kuti uzive kuisa, kugadzirisa uye kugadzira ese marudzi emapurojekiti neWordPress, iyo inonyanya kushandiswa CMS pasirese.
Zvinetso zvakajairika uye optimizations. Ini ndichave ndichisiya zuva nezuva kana iwe uchishanda neWordPress uye imwezve kuyedza zvese paSEO, kuita mari kana kusimudzira.
Ini ndicharatidza marudzi ese emapulagi, madingindira, zvishandiso uye zvatingaite navo.